यतिधेरै व्यापार घाटा ! यस वर्षकाे पहिलो महिनामै व्यापार घाटा १ खर्ब १३ अर्ब, अघिल्लो वर्षभन्दा ६२ प्रतिशत बढी-Nepali online news portal
यतिधेरै व्यापार घाटा ! यस वर्षकाे पहिलो महिनामै व्यापार घाटा १ खर्ब १३ अर्ब, अघिल्लो वर्षभन्दा ६२ प्रतिशत बढी
चालु आवको पहिलो महिनामा अघिल्लो आवको सोही अवधिभन्दा ४३ अर्ब रुपैयाँ बढीको व्यापार घाटा भएको देखिएको छ । पहिलो महिनामा आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धिदर न्यून हुँदा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको हो ।
भन्सार विभागका अनुसार आव २०७४–७५ को साउनमा ७० अर्ब २ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा भएकोमा एक वर्षको अन्तरालमा यो ६२ दशमलव ३५ प्रतिशतले बढेको हो । यसअवधिमा निर्यात वृद्धिदर जम्मा ३.१९ प्रतिशत मात्र रहँदा आयात्दर भने ५७ दशमलव १८ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यसो त चालू आवमा कूल वैदेशिक व्यापारमा आयात निर्यात अनुपात ९४.६ः ५.४ हुन आउँछ । यसको अर्थ निर्यातभन्दा आयात १७.४ गुणा बढी छ । अघिल्लो वर्ष निर्यातभन्दा आयात ११.४ गुणा बढी रहेको थियो ।
विभागका अनुसार गत वर्षको पहिलो महिना ७६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको आयात भएकोमा चालू वर्ष यो बढेर १ खर्ब २० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, निर्यात भने ६ अर्ब ७० करोड बाट बढेर ६ अर्ब ९२ करोडमात्र पुगेको छ ।
यसो त अघिल्लो वर्षको साउनमा बाढी तथा डुवानका कारण तराईका जिल्लामा रहेका केही भन्सार विन्दुमा आयात, निर्यात प्रभावित भएकाले पहिलो महिनाको आयात न्यून देखिएको थियो । सो वर्ष प्रत्येक महिना औषतमा करिव १ खर्बको आयात हुँदा साउनमा जम्मा ७६ अर्बको मात्र आयात भएको हो । यसैकारण साउनको आयातको वृद्धिदर समग्रमा उच्च देखिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार गत वर्ष साउनमा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको हवाईजहाज तथा पाटपूर्जा आयात भएकोमा यस वर्ष करिब १० गुणाले बढेर साउनमा १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात ८७ प्रतिशतले बढेको छ ।
गत वर्ष साउनमा सबै प्रकारका पेट्रोलियम इन्धन ९ अर्ब ६९ करोडको आयात भएकोमा यस वर्ष १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको आयात भएको छ ।
यसैगरी फलाम तथा स्टील वस्तुको आयात गत वर्षको साउनमा ८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको भएकोमा यस वर्ष ६९ प्रतिशतले बढी अर्थात् १४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ ।
उल्लेखित वस्तुहरुको आयात उच्च हुँदा समग्र आयातको वृद्धिदर उच्च रहन गएको विभागको बुझाइ छ । उल्लेखित बस्तुहरु बाहेक साउनको आयात करिब ७५ अर्बको रुपैयाँको भएको छ जुन अघिल्लो वर्षको साउनमा करिब ५७ अर्ब रहेको थियो ।
भारतसँगमात्रै ६७ अर्बको व्यापारघाटा
भारतसँगकै उच्च घाटाले यसवर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । चालू आवको पहिलो महिनामा भारतबाट ७१ अर्ब ३० लाख ९८ हजार रुपैयाँ बरारबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरिएकोमा ३ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख ८२ हजार रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको थियो । जसअनुसार भारतसँगको व्यापारघाटा ६७ अर्ब १ करोड ५१ लाख १६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो कूल व्यापार घाटाको ५९ प्रतिशत हो ।
व्यापार घाटाका आधारमा चीन दोस्रो स्थानमा छ । समीक्षा अवधिमा चीनबाट १४ अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ४ हजार रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएकोमा ८ करोड ५१ लाख ३० हजार रुपैयाँको मात्रै वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ । यसहिसाबमा व्यापार घाटा १४ अर्ब ८५ करोड ४० लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहेको हो ।
व्यापारघाटाका हिसाब फ्रान्स, यूएई, क्यानडा, स्टिजरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, अर्जेन्टिना, मलेसिया र दक्षिण अफ्रिका तेस्रोदेखि दशौं स्थानमा रहेका छन् ।